I-crossword, Faka futhi ujabulele kusuka ku-emulator.online
Ngaphezu kwalokhu, udinga ukwazi kabanzi ngakho.
I-crossword. Manje sizokukhombisa konke odinga ukukwazi ukuze uqonde lo mdlalo omuhle. Kusukela encazelweni yayo ye-etymological, imvelaphi yayo, izinzuzo zayo, amamodeli wephazili akhona namasu wokuyixazulula ngokushesha kepha ngokushesha.
I-crossword: Idlalwa kanjani iphuzu ngephuzu 😀
Ukuze wenze a I-crossword online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kusayithi lomdlalo Emulator.ku-inthanethi.
Ngokushesha nje lapho ufaka isiza, umdlalo uzoboniswa esikrinini. Kufanele kuphela khetha ulimi nesigaba osithanda kakhulu. Phakathi kwezigaba ongazithola kukhona: Izithelo, amakhompyutha, izilwane Amazwe, Imifino kanye Nomculo
Manje, uzothola izinkinobho ezithile eziwusizo. Can "Faka noma susa umsindo", Nikeza inkinobho"Play"Futhi qala ukudlala, unga"Misa kancane"futhi"Qala kabusha"Noma nini, Khulisa usayizi wesikrini noma okunye phuma kumdlalo.
Iyakwazi ukuhlanganisa zonke izingcezu ngendlela yokuthi isithombe osikhethile sidalwe.
Ngemuva kokugcwalisa umdlalo, chofoza "umdlalo ophumayo" ukwenza amanye amagama aphikisayo.
¿Ungayixazulula kanjani i-crossword? 🖊
Manje sikukhombisa amaqhinga ayisishiyagalombili azokusiza ukuthi uthuthuke endleleni yakho yokwenza amaphazili we-crossword:
1- Funda ithrekhi ngayinye
Into yokuqala okufanele uyenze lapho uqala i-crossword yile funda umkhondo ngamunye kusuka phezulu kuye phansi bese ufaka izixazululo ezilula. Kunconywa ukuqhubeka ngendlela ethile. Ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla noma okuphambene nalokho bese wehla wenyuka ngokufanele. Ungaqiniseka ukuthi urekhode isisombululo ngasinye esaziwayo.
Uma, ngakolunye uhlangothi, bekufanele ukhethe imibuzo ngokungakhethi bese uyinqamula, mhlawumbe amanye amabhokisi alula kakhulu adlula phambi kwakho unganakile.
Lapho usuqede lo mjikelezo wokuqala we-crossword, manje kufanele uqhubekele kwimibuzo enzima kakhulu ongakakwazi ukuyiphendula. Lokhu kwenza ukuqagela kube lula kulezi zikwele futhi ungaqala kalula umzuliswano wesibili.
Manje sekulula ukuphendula imibuzo enikeza kuphela izimpendulo eziningi ezikhona. Ukuze ube yisibonelo, uma ufuna i- isabizwana soqobo ngezinhlamvu ezi-3 , usengakhetha phakathi KWAMI, WENA, US, njll. Uma usuvele uqedile uhlamvu olulodwa noma ezimbili ngomjikelezo wokuqala, izinketho ezithile manje zingakhishwa ngokushesha futhi esimweni esihle kakhulu, kunesixazululo esisodwa esisele.
2- Sebenzisa omaka
Uma kusenezinketho eziningi kakhulu zempendulo yombuzo noma, ngokuvamile, awuqinisekile ngempendulo Ngesikhashana faka igama elixegayo ngosiba. Uma, njengoba uqhubeka nokuxazulula iphazili, kutholakala ezinye izinhlamvu zegama olifunayo, uzobona ukuthi umcabango wakho wokuqala ubulungile noma cha.
Kwesinye isikhathi kuhle ukulinda kuze kunikezwe izinhlamvu eziningi zegama elingabazekayo. Uma inye kuphela, njengesiY isibonelo, namathuba aphezulu kakhulu ukuthi kusengasebenza ukwahlukahluka okuningi. Ngalokho okuzoba ngcono ukuthi ulinde isikhashana. Uma uqinisekile kancane ukuthi igama olifunayo lilingana, ungalilandelela kahle.
3- Thatha ikhefu🙂
Uma ubambeke ezwini isikhathi eside futhi ungakwazi ukuqhubeka ngokusebenzisa igama eliwela amagama, akufanele wesabe Phumula. Bese ubeke imfihlakalo eceleni, usule ikhanda lakho wenze okunye.
Kuyamangaza ukuthi, ngemuva kwesikhathi esithile lapho ufunda umbuzo futhi, ngokuzumayo uthole umphumela omangazayo lapho ubhajwe khona ngaphambilini. Isici sesikhathi asibucayi lapho kuxazululwa igama eliyimfihlo noma kunjalo. Okusemqoka wukuthi inselelo iyajabulisa.
4- Thola indaba esembozweni
Akuwona wonke amagama aphikisayo anesihloko esithile sesihloko. Okuningi uma kunikezwa isizathu noma isihloko kusihloko, ungalindela ukuthi ingxenye ethile yemibuzo nezimpendulo iqondiswe ngqo kulokho.
Ngakho-ke lokhu akusho ukuthi igama ngalinye lisuselwa kulo. Ikakhulu, amagama amancane okugcwalisa, njengezabizwana, izifinyezo, nokunye okunjalo, ngeke asuselwe esihlokweni. Kepha uma kunetimu kaKhisimusi noma yasebusika esihlokweni esikhulu, isihlahla esinezinhlamvu ezi-5 kungenzeka ukuthi sibe yi-MOTO kune-OAK.
Lokhu kusiza kakhulu uma ungeke ukwazi ukuqhubeka nombuzo onezimpendulo eziningi ezikhona. Ngakho-ke gcina isihloko engqondweni, sizokuqondisa endleleni efanele.
5- Sesha amagama avela kwezinye izilimi
I-Los ama-crosswords zisetshenziswa kaningi ukubheka amagama ngezilimi zakwamanye amazwe. Noma kunjalo, ungaqiniseka ukuthi ngokujwayelekile ayisoze yaba nzima kakhulu isichazamazwi. Isikhathi esiningi, akusikho ukwenza kahle olunye ulimi ukuze uxazulule umbuzo. Esikhundleni salokho, kuhle kakhulu amagama amancane okungenzeka angene olimini lwakho ukusetshenziswa jikelele kolimi. Qiniseka ukuthi unezinhlamvu ezithile zegama olifunayo, lapho-ke kuzoba lula ukuqagela.
6- Thola ukuthi ulufuna hlobo luni lwegama
Ngezinye izikhathi kungaba njalo sebenzisa uphawu lombuzo ukubona kusengaphambili ukuthi iyiphi ingxenye yengxabano isixazululo okufanele sihlukaniswe. Lokhu kukunika ithuba lokubhala isiphetho ngokuphepha. Lapho kuseshwa isenzo, kuvame ukuphela ngendlela efanayo. Kuyafana ncamashi ne amagama amaningi. Uma usesha ubuningi begama, nakanjani lizophela ku -noma -s.
Ngakolunye uhlangothi, ungayisebenzisa ukufaka izinhlamvu zokugcina zegama, noma ungenasiqiniseko segama lonke. Ngakolunye uhlangothi, izinhlamvu ezimbalwa ekugcineni kwegama zisiza ukuqagela amagama amaningi awela ngokushesha. Kodwa-ke, uma ungaqiniseki ngesiphetho esifanele, sibhale okwamanje.
7- Incazelo eningi yegama
Ngemibuzo ethile kufanele ubheke ngaphezu kokukodwa. Hhayi mhlawumbe i- cela uqobo kube okungaqondakali. Okokuqala, ngenxa yokuthi igama embuzweni lingaba nezincazelo ezihlukile, ukuze lisebenze njengesibonelo eBanco. Uma ubuzwa ukuthi wenzani ebhange, kufanele ubheke ukuthi kungasho ukuthi yibhange lesihlalo kanye nebhange lezezimali.
Ngemuva kwalokho impendulo ibingasho "hlala lapho" Kulungile "tshala imali ".
Kukhona nokuthi kungenzeka ukuthi inothi liqondwe ngokwezwi nezwi noma ngesaga. Ukuzindla ngasekhoneni kwesinye isikhathi kuyadingeka lapha. Musa ngaso sonke isikhathi futhi ngaso sonke isikhathi uthathe incazelo yamagama ejwayelekile, kepha futhi zama ukubheka amanye amazinga. Ukuze ube yisibonelo, uma ucelwa indlela eya eRoma, impela akufanele usho umgwaqo othile noma indlela, kepha impendulo ingaba YONKE, ngokwesisho esithi "Yonke imigwaqo iholela eRoma".
8- Lapho kungekho okusizayo ...
Uma manje uwalandele wonke lawa macebiso futhi namanje ungakwazi ukuqhubeka ngamagama athile, akunasizathu sokubuza amathiphu athile. Makube njalo cela izeluleko kubangani abathile noma abantu obajwayele bakudala noma basebenzise izincwadi zesiko noma zedijithali.
Ngakho-ke izichazamazwi, izichazamazwi noma ama-encyclopedia, omunye wabo mhlawumbe usekhaya. Kodwa-ke, uma usohambeni futhi uxazulula i-crossword endaweni ehlukile, ungakhetha okunikezwayo okuningi okuku-inthanethi kosizo lwephazili.
Siyethemba ukuthi lolu lwazi lube wusizo kuwena. Futhi, uma uzizwa usukulungele manje, sikulinda ukuthi uqale ukwenza eyakho iphazili.
I-Los ama-crosswords Kuyisikhathi sokuchitha isizungu esenziwe ngochungechunge lwezikwele ezingenalutho okufanele ekugcineni uqedele umdlalo. Thola igama ngalinye usebenzisa izeluleko zamahhala. Njengoba amagama athile eseqediwe, izinhlamvu ezithile ngamanye amagama zivele zizenzekele, okwenza isinqumo sibe lula. Kuvame kakhulu emaphephandabeni nakumagazethi futhi, ngakho-ke, bayaphumelela nakwi-Intanethi.
La Ubunzima be-crossword buyashintsha ngokuya ngesakhiwo nenombolo yamagama. Lapho amagama ewela kancane futhi amagama eba ngaphezulu umdlalo unamathuba amakhulu okuthi umdlalo uzoba nzima impela. Ngaphezu kwalokhu, izinga lokuxakaniseka liyashintsha ngokuya ngesihloko segama eliphambanweni, ngakho-ke uma ufunda ukudlala, khetha isihloko osithandayo futhi onolwazi ngaso.
Ama-crosswords okwamanje enye yezinto zokuzilibazisa ezithandwa kakhulu, yize belahlekelwe yindawo phambi kweminye imidlalo efana sudoku. Alikho neze iphephandaba noma igazethi elingenayo ingxenye yokuzilibazisa efaka isiphambeko esisodwa noma eziningi ze-crossword. Kodwa konke kwaqala ngasiphi isikhathi?
El isiphambano sokuqala esaziyo kwenzeka ngoDisemba XNUMX, XNUMX, lapho iphephandaba NgeSonto iNew York World phrinta iphazili ebizwa ngokuthi "iphazili", ithuthukiswe ngu U-Arthur Wynne, umlando waseNgilandi waseLiverpool. Iphazili lalihlasela umphakathi ngokushesha futhi laba yinto ehehayo masonto onke yokushicilelwa.
Ngaphandle kwempumelelo yayo, IWorld bekungukuphela kwephephandaba ukushicilela le phazili kuze kube ngu-1924, ngesikhathi umshicileli wokuqala ekhipha ukuhlanganiswa okuphelele kwamaphazili e-crossword ashicilelwe ngokuhamba kwesikhathi yiWorld, ngefomethi yencwadi. USimon & Schuster yethule ubuwula obusha obuzoba ngomunye wabashicileli abakhulu kunabo bonke emhlabeni.
Ibhodi lamagama- Uhlobo olulodwa lwe-acrostic oluqukethe iqoqo lezinhlamvu ezichazwe kusikwele 'grid', ukuze amagama afanayo afundwe ngokuvundlile nangokuqondile, aqala ezikhathini zasendulo.
Ukhokho omdala owaziwa kakhulu we-crossword puzzle watholakala edolobheni laseThebes ethuneni lompristi omkhulu uNeb-wenenef oqokelwe lowo msebenzi ngonyaka wokuqala wokubusa kukaRamses II, ufaro wobukhosi bakwa-XNUMX (XNUMX - XNUMX) amakhulu amabili ngaphambi kukaKristu). Ngasohlangothini lwesobunxele lwephaseji eliholela ekamelweni elingaphakathi lethuna, a itshe elikhulu okwabhalwa kulo izithombe zabantu kanye nochungechunge lwama-hieroglyphs.
Lo mbhalo uqukethe kuphela uchungechunge lwemithandazo etusekayo mayelana nonkulunkulu u-Osiris, umvikeli kamufi, njengoba kwakuvamile ngaleso sikhathi. Okuningi indlela ama-hieroglyphs ahlelwa ngayo yamangaza abavubukuli. Sekukonke kunemigqa eyishumi nanye evundlile. Khona maphakathi nabo, kwabekwa ikholomu ukukhomba ukuthi ama-hieroglyphs, afundwa abheke phezulu, nawo anengqondo.
Kusukela lapho iqhubekile nokwanda kuwo wonke umhlaba, iba ezisemqoka kunoma iyiphi i-gazette noma iphephandaba.
Izinhlobo Zamagama Okuwela
Ama-crosswords anezinhlobo ezahlukahlukene. Lokhu kungahlukaniswa kube indawo yonke, okuyisithonjana, okuqanjiwe, okungekuhle, ngokwandiswa, nangokuqagela. Kumaphasiwedi anezinga "elilula", i- incazelo yokuqokwa, kulandele ukubhula. Kulabo abanezinga "elinzima impela", isimo sibuyiselwa emuva: incazelo ngokubhula ilandelwa ngegama.
Noma kunjalo, amagama aphikisayo avezwa ngezigaba ezahlukahlukene. Ake sibone ukuthi ziyini:
Luhlobo lwe-crossword lapho azikho izikwele ezimnyama, lapho umbambiqhaza ngokwakhe kufanele athole indawo yakhe.
Umhumushi we-Crossword noma uBilingual
Leli gama eliqondayo lihlose ukufunda a ulimi olusha.
Luhlobo lwesimo lapho ibhokisi ngalinye kufanele lifakwe khona uhlamvu esikhundleni sohlamvu olulodwa.
Lolu hlobo lwe-crossword luthandwa kakhulu namuhla. Kuqukethe i- isithombe somlingiswa lapho eyodwa noma eziningi zezincazelo ahambisana negama noma izibongo ezifanayo.
Kule ndlela eyinkimbinkimbi Usebenzisa umusho ofihla iziyalezo ukwakha noma ukuthola isixazululo phakathi kwamagama omusho. Kuyinto eyodwa e-UK lapho i-crossword evela kuThe Times ivelele.
Izingcingo ezihamba phambili ezimangelengele, izingcingo ezingenakonakala: yiziphi okufanele uzikhethe
Ungayisebenzisa kanjani i-Google Lens ku-Android naku-iPhone / iPad
I-OLED noma i-QLED: yibuphi ubuchwepheshe obuhle kakhulu bama-TV amasha?
Ungayenza kanjani ngokwezifiso i-Gmail ngamathuluzi amahle kakhulu
Ungawulalela kanjani umculo wamahhala nge-Google Assistant ne-Nest
Ungayivula kanjani imibhalo engezansi ku-TV
Uyishaja kanjani ifoni yakho ngaphandle kweshaja
Ungayakha kanjani iseva yokuphrinta yehhovisi
Ukuhlolwa kwezobunhloli eJapan kuzophothulwa ngemizuzu engu-15
Ungayinika kanjani amandla i-virtualization ku-BIOS, ngemishini ebonakalayo ebonakalayo esheshayo
Kungcono i-PC noma i-PS5 / Xbox series ongayidlala?
Ungalilungisa kanjani iphutha le-BSOD (0xc00000e) ku Windows 10